အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးများဖြင့် ၃ နှစ်တိတိ ကုသသော်လည်း ကွယ်နေသော မျက်စိကို ဆရာတော်ကြီးအစွမ်းဖြင့် ပြန်မြင် – Zartiman
ဟိုးအရင် ၇တန်းကျောင်းသားဘဝက စပြီး မျက်စိကွယ်တာပါ…မျက်စိကွယ်လို့ ကျောင်ထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဟောအခု မြစိမ်းရောင် ဆရာ တော်ဘုရားကြီး၏ သမထအစွမ်း ဆေးဝိဇ္ဇာ တို့၏ဆေးစွမ်းဖြင့်ကုသပေးရာ ကွယ်နေသောမြင်စပြုလာပါပြီ….။ အမေကိုလည်း အဖေကို လည်းမြင် လောကကြီးသုံးပါး ကိုလည်းမြင်လို့ မိဘနှစ်ပါးမှာ ဝမ်းသာလွန်းလို့မျက်ရေများတောင်ကျရပါတယ်….။သားဖြစ်သူကလည်း အမေကို မြင်လို့ အမေကိုဖက်ငိုသလို အမေကလည်း သားကိုဖက်ငိုနေသည်မှာ ဝမ်းသာဝမ်းနည်းဖြစ်ရပါသည်။
အလားတူ ကုလိုသော ဝေဒနာရှင်များ ယခုပေးလိုက်သောဖုန်းကို ဆက်သွယ်နိင်ပါသည်။၃နှစ်တိတိ မျက်စိကွယ်နေသော ကျနော်၏သား အခု’မျက်စိ ပြန်မြင် သွားပါပြီခင်ဗျာ…. ကျနော်ကတော့ ထောက်ကြန့် အမှတ်၆ ခြေမြန်တပ်ရင်း မှ တပ်ကြပ်ကြီး ကျော်ဆန်းဝင်းဖြစ်ပါ တယ်။ ကျနော်၏သား မောင်ကောင်းမင်းခန့်သည် ဦးဏှောက်အကြိတ် တည်နေ၍ ဆေးရုံတက်ဆေးဝါး ကုသခံနေရာမှ မျက်စိလုံးဝမမြင် ရပဲကွယ်သွားသည်မှာ ၃နှစ်ရှိသွားပါပြီ…။
ဆေးရုံပြောင်းပြီး မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးများဖြင်. ကုသသော်လည်းကု၍မရပါ….။ သတင်းအရ’ပဲခူးတိုင်း ဖြူးမြို့နယ် အမြန်လမ်း ၁၀၇ မိုင်၃မှာသတင်းသုံးနေသော မြစိမ်းရောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသွားရောက်ပြသကု ရာ’ယနေ့မှစကုပါသည်။ ယနေ့ပဲကျနော်၏သား မျက်စိပြန်မြင် စပြုလာပြီ….အဖေကိုလည်း မြင်ရပါပြီ….အမေကိုလည်းမြင်ရပါပြီ…။မြစိမ်းရောင်ဆရာတော် ဘုရားကြီးအား ဖူးမျှော်ကြည် ညိုလိုသူများ’ကျန်းမာရေး ပြသလိုသူများ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းဝ၉၆၇၄၀၆၉၉၇၅ ။လွမ်း ကြာဖြူ
၀၉၆၇၄၀၆၉၉၇၅ ကျနော်မောင်ကောင်းမင်းခန့်ပါ အားလုံးင်္ဂလာပါ….။